Waa tee kooxda Isbuuca soo socda xaqiijinaysa saxiixa Neymar Jr… (Ma Juve, ma Real Madrid mise Barcelona?) – Gool FM
(Paris) 20 Agoosto 2019. Waxaa la shaaciyey kooxda isbuuca soo socda dhammaystiraysa saxiixa ciyaaryahan Neymar Jr, iyadoo ay xiiseynayaan haata kooxaha Juventus, Real Madrid iyo Barcelona.
Barcelona ayaa lagu soo waramayaa inay qarka u saaran tahay inay dalab rasmi ah oo amaah ah ku qaadato isbuucan weeraryahankoodii hore ee Neymar Jr kaas oo aan la hubin mustaqbalkiisa kooxda Paris Saint-Germain.
Mustaqbalka 27-sano jirka reer Brazil ee caasimadda Faransiiska ayaa ah mid aan saldhigan tan iyo markii uu furmay suuqa kala iibsiga xiddigaha, iyadoo ciyaaryahanka PSG uu u muuqdo inuu go’aansaday inuu ka tago kooxdii uu ugu soo iibsaday in ka badan 200 milyan oo gini sanadkii 2017-kii.
Madaxda naadiga Barcelona ayaa u muuqday inay meesha ka saarayaan inay la soo wareegaan xiddigii hore ee Santos, balse Majaladda ESPN ayaa haatan warinaysa in kooxda ka dhisan gobolka Catalan inay u soo bandhigayaanPSG inay amaah kula soo wareegaan Neymar Jr xilli ciyaareedkaan si ay ugula wareegaan heshiis joogto ah sanadka dambe ee 2020.
Warkan ayaa imanaya isbuuc uun kaddib markii ay madaxda kooxda PSG diideen dalabka Barcelona ee ahaa 80 milyan oo euro oo u dhiganta 73 milyan oo gini oo lagu daray xiddigaha khadka dhexe ee Philippe Coutinho iyo Ivan Rakitic, iyadoo kooxda reer France la rumeysan yahay inay doonayaan lacag badan iyo daafaca Nelson Semedo ama Rakitic.
Warbixinta ayaa sidoo kale soo jeedineysa in inkastoo Neymar laftiisa uu jecel yahay inuu dib ugu laabto garoonka Camp Nou, haddana in Coutinho uu amaah ugu biiray kooxda Bayern Munich ay Real Madrid fursad u siineysa tartanka loogu jiro saxiixa xiddigan wayn.
Si kastaba ha ahatee, xiddigan garab weerarka uga ciyaara PSG ayaa lagu wadaa in kooxda Barcelona ay isbuucan amaah ku soo qaadato xilli aan la sii saadaalin karin waxa dhici kara maalmaha ka haray suuqa kala iibsiga horyaallada France iyo Spain.